daadah.com - Suul-nuugista
Home » Ababinta » Suul-nuugista
Tags: faranuug, suulnuugista
Soomaalidu naynaas-bixinta dhib kalama kulmaan waayo markiiba qaabka, iinta jirka ama dabeecada qofka ayay ka dhiraandhiriyaan markay qof naynaasayaan. Waxaan aqaan nin aabihiis la yiraahdo “Fara-nuug”. Naynaastaasi sharaxaad uma baahna siday ku timid oo waa cadahay. Waa iyadoo Faranuug markii uu yaraa faraha ama suulka nuugi jiray.
Nuugista faraha ama suulka waxay soo bilaabataa inta ilmuhu uurka ku jiro oo uu isku maaweeliyo.
Suul-nuugista oo bilaabata inta ilmuhu uurka ku jiro – Courtesy of wikipedia
Suul-nuugistu waa dabeecad qaar ka mid ah ilmuhu u isticmaalaan inay isku mashquuliyaan marka ay daalan yihiin, marka ay hurdo soo hayso, marka ay jiran yihiin, marka ay xiiso-dhacsan yihiin iyo marka ay walwalsan yihiin.
Sida khubaradu isku raacsan tahay Suul-nuugista wax dhib ah ilmaha uma keento inta ay ka yar yihiin shanta sanno. Sidaas awgeed, Muhiim maaha in ilmaha yar cadaadis lagu saaro in laga jaro faranuugista inta ay yar yihiin waayo inta badan ilmuhu way iska daayaan inay farahooda nuugaan marka ay dhaafaan da’da shan jirka.
Sidoo kale, maahan in laga walwalo dhamaan noocyada faranuugida. Qaar ka mid ah ilmaha suulka iyo farta uun bay afka galiyaan iyagoo aan oo si adag u nuugayn. Haddii ilmuhu suulka ama farta afka intuu galiyo si adag u nuugo suulka waxaa caddaadis fulaa dhab-xanaga ilkuhu ka soo baxayaan iyo suulka cididiisa. Haddii dhabxanaga caddaadis fuulo waxaa laga yaabaa in qaabdaro ku dhacdo ilkaha xilliga ilkaha joogtada ah soo baxayaan. Dhinaca kale, waxaa dhaawac soo gaaraa farta ama suulka ciddidiisa oo laga yaabo in infection ku dhaco. Maqaarka farta ama suulka oo qalala oo dilaacyo yeesha.
Welwelku wuxuu imaanayaa marka ilmaha gaara 5 sanno jir oo haddana aan iska goyn suul-nuugista. Markaan waxaa yimaada sidaan horay ku sheegnay dhibaato ilkaha iyo maqaarka suulka.
Waalid ahaan deris sida ilmuhu suulka u nuugayo . Haddii uu u nuugayo si adag waa xilliga ay tahay inaad ka goyso inta uusan gaarin 4 sanno jirka. La tasho dhaqtarka ilkaha oo ku siinaya tallooyin kaa caawinaya sidii looga jari lahaa dabeecadaan.
Suul-nuugista ama fara-nuugistu ma ahan calaamad caafimaad-darro ama naaqus maskaxeed oo ilmaha ku imaan karta marka uu waynaado ee waa dabeecad ilmuhu iska jaro si dabiici ah.
Tallooyin guud oo ku saabsan sidaad u jari lahayn suul-nuugista
Haku canaanan/garaacin ilmaha inuu nuugayo suulkiisa/fartiisa. Si xoog ah farta ilmaha afkiisa ha uga bixin waxaa laga yaabaa inuu bilowdo loollan awoodeed u dhexeeya adiga iyo ilmaha yar.
Billow qorshe adiga iyo ilmaha aad heshiis ku noqonaysaan inaad abaalmarin siinayso haddii ilmuhu ku guulaysto inuusan fartiisa nuugin tusaale ahaan maalin,asbuuc ama bil.
Ha ku xirin farta ilmaha sharooto ama faashad adigoo ka hortagaya inuusan nuugin suulkiisa/fartiisa waayo ilmuhu wuxuu dareemayaa in loo diidayo hab wanaagsan oo uu isku maaweelinayo.
Ha marin farta ilmaha basbaas waxaa laga yaabaa inuu dhibsado
Waxaad isticmaali kartaa dareere qaraar oo aad cidida dusheeda marin karto oo xasuusinaysa ilmaha inta uu hurdo inuusan farta afka gelin. Dareerayaasha farta ilmaha la mariyo waxaa laga helaa dukaamada iyo farmashiyeyaasha . Qaar ka mid ah waalidiintu waxay isticmaalaan barafuunka oo cidida korkeeda in yar lagu buufiyo ka dib marka ilmaha ogolaansho laga helo.
Qaar waalidiinta ka mid ah waxay isticmaalaan ilmaha inay u xiraan gloves gaar ah oo cabirka faraha ilmaha leh.